I-Deep Groove Ball Bearings High Speed ​​Limit - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-Deep Groove Ball Bearings Umkhawulo wokuvinjelwa okukhulu
I-deep groove ball bearing structure is elula, kulula ukuyisebenzisa, iyinhloko yokukhiqiza enkulu kunazo zonke, esetshenziswa kabanzi ekilasini lamabherethi. Isetshenziswa kakhulu ezimotweni, imishini yamakhaya, amathuluzi emishini, amabhomu, amaphampu, imishini yokulima, imishini yokugqoka, nezinye izindawo eziningi. Ukukhiqizwa kwalo kubangele okungaphezu kwezingu-70% kokukhishwa kwama-bearings, ukukhiqizwa okuphezulu kakhulu kwe-China, ukusetshenziselwa kakhulu kwezindleko ezishibhile ekilasini lamabherethi. I-deep groove ball bearings ingasho ukuthi iyingxenye yezintambo zokugubha, isisetshenziswa somshini ngalesi sigaba ku-polyvalence sinamandla kakhulu, kanti izingxenye eziyisisekelo nazo ziyizinga eliphakeme lokumiswa, izici ze-serialization.
Ama-bear groove ball bearings angasho ukuthi yiwona osetshenziselwa kakhulu umkhiqizo owenzayo, okwakhiwa kokubunjwa kwendandatho yangaphakathi, indandatho yangaphandle, ibhola lensimbi, i-cage, amafutha, izigxobo kanye nezinye izingxenye ezihlobene.
Izintambo ezingezona ezejwayelekile ezifaka impahla